कार्टुनः प्रधानमन्त्रीले भन्या रेल यही पोखरेल नै हो क्या! | Nagarik News - Nepal Republic Media
कार्टुनः प्रधानमन्त्रीले भन्या रेल यही पोखरेल नै हो क्या!
११ भाद्र २०७७ १ मिनेट पाठ
आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित कार्टुन। जसलाई रविन सायमीले बनाएका हुन्।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०६:५४ बिहीबार
अफगान महिला अधिकारका लागि सहयोग गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह
अफगानिस्तानका लागि ‘युएन वुमन’ का उपप्रमुख एलिसन डेभिडियनले सो कुरा बताएका हुन्। अहिले अफगानिस्तानका महिलाको अवस्था निकै नै नाजुक रहेकाले विश्वका हाल अफगानिस्तानलाई सहयोग गरेका संघसंस्थाहरुले पनि यहाँ महिला अधिकार र उनीहरुको सशक्तिकरणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे।
छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा हुनसक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले विसं २०५० बाट भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
धरानको फुस्रेमा आगलागी
उनका अनुसार आगो समयमा नियन्त्रण नआएको भए र ग्याँस पड्किएको भए थप ठूलो क्षति हुने थियो।
भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा पुनः वृद्धि
भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्यामा पुनः वृद्धि भएको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको विवरणमा पछिल्लो एक दिनमा भारतमा १४ हजार ६२३ जना कोरोना भाइरसबाट नयाँ सङ्क्रमित भएको उल्लेख गरिएको थियो भने बिहीबार त्यो भन्दा चार हजार बढी देखिएको छ।